Coca imbali yeGit > UVielhuber uDavid
Coca imbali yeGit09
Idatha ebuthathaka enjengegama eligqithisiweyo kufuneka ibe kwiifayile ze-env kwaye, ukuba kunokwenzeka, zingagcini kwindawo yokugcina izinto zeGit. Kodwa kungenzeka ukuba yenzeke kuye ngamnye kuthi kube kanye ngempazamo: Ngokukhawuleza upapashe iskripthi esihle seGoogle Maps JS API kwiGitHub Gists (njenge "esidlangalaleni") ngaphandle kokufihla ngempazamo izitshixo zabucala zeemephu ze-API.
Ngethamsanqa, iqela le-Google Cloud Platform Trust kunye noKhuseleko liqalisile ukucofa iminwe yakho ngee-imeyile ezizenzekelayo ezingagcini nje ngegithub.com kwizitshixo ze-API zoluntu kwinqanaba elikhulu:
Sifumene isitshixo esifikeleleka esidlangalaleni seGoogle API esidityaniswa nale projekthi ilandelayo yeLifu likaGoogle:
Lixesha lokuba wenze into yakutshanje. Ngethamsanqa, nkqu neGit iyaxoleka. Iskripthi esilandelayo se-bash sisebenzisa isicoci esikhulu se- BFG repo (hayi, oku akuthethi ukuba sisixhobo esivela kwi-DOOM) kwaye sisuse isitshixo se-API kumgca wesi-5 weGit yokugcina kumgca we-6:
I-PS: Isitshixo se-API kumgca wesi-5 sisiqhulo.